Highlights China Meditech muna 2018 Manufacturer uye mutengesi | Meditech
Sei sarudza Meditech
Psa Medical Kwezvokudya Nemiti Generation
All-in-imwe Medical Kwezvokudya Nemiti Systems
Madiki Kwezvokudya Nemiti Generators
Central Monitoring uye Control System
Home Kwezvokudya Nemiti Concentrators
Highlights Meditech muna 2018
Sei nguva inomhanya! 2018 akatotora chokuzunguzira bhayibhayi kwatiri. Pasina mubvunzo, 2018 kuva gore rinokosha zvikuru kukura munhoroondo Meditech.
Tarisa shure zvakare, tinotenda kuti danho rimwe mberi chichange chakavezwa sezvo nokusingaperi rinoronga kuti Meditech kukura kare.
Chinogara chichingoitwa Innovation
Technical utsanzi ndiyo kuramba nyaya Meditech.In 2018, Meditech jekiseni simba idzva kuti zvinhu yaro kuongorora zvamakaparadza-mucheto michina.
Meditech anosika yokutanga kure centralized kudzora mamiriro munyika, iri kure centralized kudzora mamiriro kuziva akawanda rinovira, zvakawanda uye chidhiraivho okisijeni rudzi ino, izvo zvinogona kuitwa uyewo uye rinoshandiswa nenzira yakanaka. Zvinoita muenzaniso itsva kure kudzora okisijeni rudzi maitiro uye inopa mukana kokutanga uye wokutanga basa.
MD2018 itsva Integrated okisijeni rudzi hurongwa, modular kufamba, yakazvimirira chiutsi mutsinga dzinofamba nemukaka, Ultra-shoma ruzha design, nokuputsa chinyakare okisijeni jenareta iri revadzidzi yakarongeka, mukuru ruzha, mukuru tembiricha, kusagadzikana kuchena zvatisingakwanisi.
The G akatevedzana mienzaniso anorenda yakataurwa Meditech uye Atlas, izvo yakatsiga zvikuru uye akavimbika unhu uye unongotaura.
Kuvaka World High-mugumo Brand
Mumakore gore, Meditech akaita kubudirira zvikuru pamwero mukuru kuratidzira kumba uye kunze, achiratidza simba raJehovha munyika akazvimirira utsanzi muchiso.
Dubai zvokurapa kuratidza
2018 CMEF Spring kuratidza
2018 CMEF Autumn kuratidza
Taiwan dzinovaraidza kuratidza
India zvokurapa kuratidza
Australian dzinovaraidza kuratidza
Mugore rino, Meditech hwakagadzwa Ausmedi Kavia India bazi. In mishomanana, ivo vakakunda hwakawanda mirairo uye zvinobudirira akagadzawo 5 zvipatara, zvichiita kuti chinokosha mukwikwidzi iri bhodhoro bhizimisi kweIndia.
Mugore rino, Ausmedi nokushingaira akasimudzira hurumende-zvebhizimisi pamwe, uye zviri pamutemo akava rinokosha nokutengesa kuna Vetcentric, Australian guru dzinovaraidza mubatanidzwa, uye akanga achangogadzwa Ringwood Vet Emergency, Australia guru uye kwazvo dzinovaraidza wezvokurapa okisijeni chizvarwa hurongwa.
Meditech akagadza hwokugadzira uye inokosha vaishanda vose Ozone Water Systems kuUnited States pakuziva nopindirana zvakanakira mativi ose 'pfuma uye anorenda nekusimudzira kukura zvikuru pose okisijeni kugadzirwa uye Ozone kushanda.
Meditech uye Atlas vava franchised vakaroorana kuti anorenda kuumba uye kugadzira zvitsva okisijeni kugadzirwa mienzaniso uye kupa nyika kutungamirira yakachena kugadzirwa mhinduro.
Meditech ave kuitwa indasitiri-yunivhesiti-tsvakurudzo pamwe zhinji mumayunivhesiti akakurumbira uye mamwe masangano. Ndeyokubvuma chikoro-zvebhizimisi pamwe nemikana, kambani anoramba anovandudza kwayo kuzvimirira utsanzi kugona uye zvinopa hwokugadzira rutsigiro zvakanaka uye basa nokuda indasitiri.
Kubva rinogumbura pakutanga, kuti zvishoma nezvishoma kukura, mukusaziva, Meditech aenda kuburikidza kwemakore 15. Ndinokutendai ramunotarisira, rutsigiro, kuvimba uye kurudziro panzira!
Post nguva: Apr-17-2019
Scale Large Kwezvokudya Nemiti jenareta , Animal Oxygen Concentrator, Fish Farming Oxygen Generator,
Address: NO. 62-63, Xinmao, Qilu Science Technology City, 299 Zidong Avenue, Jinan New Zvekushandisa Industrial Park, Tianqiao District, Jinan, Shandong Province, China
Meditech Wakapindwa Veterinary Association ...
Meditech vakapenyerwa pana Arab Health 2019